Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 5) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2015-03 mpandimby ny Magazine > Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 5)
Tamin'ny fotoana farany izay niarahanay ny fahitana ny fahamarinana sy ny zava-misy momba ny Fanjakan'Andriamanitra efa misy nefa mbola tsy vita dia nitarika ireo kristiana sasany ho diso fandresena ny fandresena, fa ny sasany kosa nitarika ny fahanginana. Amin'ity lahatsoratra ity dia manohitra fomba hafa isika hamaliana an'io fahamarinana sarotra io amin'ny finoana.
Mandraisa anjara amin'ilay asa mitohy nataon'i Jesosy amin'ny fanompoana ny Fanjakan'Andriamanitra
Raha tokony hifikitra amin'ny triumphalism (izay fikatrohana mikendry ny hanatanteraka ny fanjakan'Andriamanitra) na ny fanginana (izay tsy miraharaha izay mijoro amin'ny fialana amin'ny lalana, mametraka ny zava-drehetra amin'Andriamanitra), dia antsoina isika rehetra mba hanana fiainana feno fanantenana izay manome endrika. amin’ny tena famantarana ny fanjakan’Andriamanitra ho avy. Mazava ho azy fa ireo famantarana ireo dia manana dikany voafetra ihany - tsy mamorona ny fanjakan'Andriamanitra, ary tsy manao izany ho misy sy marina. Na izany aza, izy ireo dia manondro mihoatra noho ny tenany ny zavatra ho avy. Mitondra fiovana eo amin’izao sy izao izy ireo, na dia tsy afaka mitaona ny zava-drehetra aza. Havana fotsiny no ataon'izy ireo fa tsy fanavahana. Izany dia mifanaraka amin’ny fikasan’Andriamanitra ho an’ny Fiangonana amin’izao vanim-potoana ratsy izao. Ny sasany, izay mirona hifikitra amin’ny fomba fisainan’ny mpandresy na mangina, dia hanohitra izany ary hilaza fa sarotra na tsy azo lazaina mihitsy ny fametrahana famantarana izay manondro ny fanjakan’Andriamanitra ho avy ihany. Araka ny hevitr'izy ireo dia tsy mendrika izany raha tsy afaka mitondra fiovana maharitra izy ireo - raha tsy afaka manatsara izao tontolo izao izy ireo na farafaharatsiny mahatonga ny hafa hino an'Andriamanitra. Ny tsy raisin’ireo fanoherana ireo anefa dia ny hoe tsy azo jerena mitokana amin’ny fanjakan’Andriamanitra ho avy ireo famantarana voatondro, vonjimaika ary voafetran’ny fotoana izay azon’ny Kristianina apetraka eto sy ankehitriny. Fa nahoana no tsy? Satria ny asa kristiana dia midika fandraisana anjara amin’ny asan’i Jesosy tsy tapaka, amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no ahafahantsika miray amin’ny mpanjaka amin’ny fitondrany eto sy ankehitriny koa amin’izao fotoanan’izao tontolo izao ratsy izao — fotoana izay horesena. Ny Tompon’ny fanjakan’Andriamanitra ho avy dia afaka miditra an-tsehatra amin’izao vanim-potoana ankehitriny izao ary mampiasa ny fijoroana vavolombelona voatondro, vonjimaika ary voafetran’ny fotoanan’ny fiangonana. Izany dia miteraka fahasamihafana eo amin’ny eto sy ankehitriny, na dia tsy mitondra ny fiovana lehibe indrindra izay tonga amin’ny fahavitan’ny fanjakan’Andriamanitra aza.
Ny fahazavan’ny fanjakan’Andriamanitra ho avy dia tonga amintsika ary mamiratra antsika amin’ny lalantsika eto amin’ity tontolo maizina ity. Tahaka ny manazava ny haizin’ny alina ny hazavan’ny kintana, dia manondro ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny mitataovovonana feno ny famantarana ny Fiangonana, izay hita amin’ny teny sy ny asa. Misy vokany ireo teboka kely amin'ny hazavana ireo, na dia ambara fotsiny aza, vonjimaika sy vonjimaika. Amin’ny alalan’ny asa soa ataon’ny Tsitoha dia lasa fitaovana miaraka amin’ny famantarana sy ny fijoroana ho vavolombelona ananantsika isika, voatarika amin’ny asan’ny tenin’Andriamanitra sy ny Fanahy Masina. Amin’izany fomba izany no ahafahantsika mikitika ny olona sy miaraka aminy amin’i Kristy mankany amin’ny fanjakany ho avy. Andriamanitra mihitsy no miasa eto sy ankehitriny alohan'ny hahatongavan'ny fanjakana amin'ny fahatanterahany. Ambasadaoron’i Kristy izahay; satria Andriamanitra no mananatra amin'ny alalantsika (2. Korintiana 5,20). Amin’ny alalan’ny teny fitorian-teny, izay azo ampiasaina amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, Andriamanitra dia manome fahafahana ny olona amin’ny alalan’ny finoany efa ao amin’ny fanahy, ho olom-pirenen’ny fanjakan’Andriamanitra ho avy, handray anjara amin’izany fanjakana izany (Romana). 1,16). Ny kaopy rano tsotra rehetra atolotra amin’ny anaran’i Kristy dia tsy misy valisoa (Mat 10,42). Noho izany, dia tsy tokony hanilika ireo famantarana na fijoroana vavolombelona ataon’ny mpino ao amin’ny Fiangonan’Andriamanitra ho toy ny tandindon’ny fo sy fihetsehana madiodio izay manondro zavatra tsy mbola tena izy. Nampian’i Kristy ho an’ny tenany ny asa fametrahana famantarana ary mampiasa ny fijoroana ho vavolombelona ananantsika mba hitarihana ny olona hifandray aminy manokana. Noho izany dia mahatsapa ny fisian’ny fitondrany feno fitiavana izy ireo ary mahatsapa fifaliana sy fiadanana ary fanantenana amin’ny alalan’ny fitondrany ara-drariny feno fitiavana. Mazava fa ireo famantarana ireo dia tsy manambara ny fahamarinana manontolo momba ny hoavy ho antsika, fa manondro izany fotsiny. Izy ireo dia manondro - na tamin'ny lasa no nitodika tany amin'ny ho avy koa - izany dia maneho an'i Kristy, izay teo amin'ny fiainany sy ny fanompoany teto an-tany dia tonga Mpamonjy sy Mpanjaka amin'ny zavaboary rehetra.Ireo famantarana ireo dia tsy eritreritra, teny, hevitra na an'olon-tokana fotsiny, traikefa ara-panahy tena manokana. Ny mariky ny finoana kristiana dia mijoro ho vavolombelona amin’ny fotoana sy ny habaka, amin’ny nofo aman-dra, momba ny momba an’i Jesosy sy ny ho endriky ny fanjakany ho avy. Mitaky fotoana sy vola, ezaka sy fahaiza-manao, eritreritra sy drafitra, ary fandrindrana ny tsirairay sy ny fiaraha-monina izy ireo. Afaka mampiasa azy ireo amin’ny alalan’ny Fanahiny Masina ny Tsitoha ary manao izany koa mba hahatanterahan’izy ireo ny fikasana tokony ho azy: fitarihana ho an’Andriamanitra ao amin’i Kristy. Ny fampidiran-dresaka toy izany dia mamoa voa amin’ny endrika fiovana izay mamokatra amin’ny fibebahana (fibebahana na fiovan’ny fiainana) sy ny finoana, ary koa amin’ny fiainana feno fanantenana ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra ho avy.
Koa ataontsika ho an’ny Tompontsika ny fotoanantsika, ny herintsika, ny fananantsika, ny talentantsika ary ny fotoana malalaka. Miady amin'ny fahorian'ny sahirana amin'izao tontolo misy antsika izao isika. Miditra an-tsehatra izahay hanampy amin'ny hetsika ataonay sy ny fanoloran-tena mavitrika, izay zarainay amin'ny olona mitovy hevitra ao anatin'ny paroasy sy ivelan'ny paroasy. Miara-miasa amin'ireo izay tsy (mbola) ao anatin'ireo vondrom-piarahamonina ireo ihany koa ny fandrafetana ny fiahiana izao tontolo izao. Ny fijoroana ho vavolombelona momba ny finoana izay raisintsika momba ny So Ask dia mety ho an'ny tena manokana sy am-bava, saingy tokony hampiharina ampahibemaso sy ho an'ny daholobe koa izany. Amin’ny fanaovana izany, dia tokony hampiasa ny fomba rehetra ananantsika isika. Amin’izay rehetra ananantsika sy ataontsika ary lazainay, dia samy mitondra hafatra iray ihany izahay amin’ny fomba rehetra azonay atao, ka manambara hoe iza Andriamanitra ao amin’i Kristy ary haharitra mandrakizay ny fitondrany. Miaina eto sy ankehitriny isika, eny fa na dia ao amin’ny tontolo mpanota aza, ao amin’ny fiombonana amin’i Kristy sy amin’ny fanantenana ny fahatanterahan’ny fanjakany. Miaina feno fanantenana lanitra vaovao sy tany vaovao isika amin’ny fotoanan’izao tontolo izao ho avy. Miaina amin'izao fotoana izao isika amin'ny fahalalana fa mandalo izao tontolo izao - satria noho ny tenin'i Jesosy Kristy sy ny fitsabahany dia tena nisy tokoa izany. Miaina ao anatin’ny fahatokiana isika fa efa manakaiky ny fahatanterahan’ny fanjakan’Andriamanitra – satria izany tokoa no izy!
Araka izany, ny fijoroanay ho vavolombelona, ​​izay omentsika amin'ny maha-kristiana, na dia tsy lavorary aza, tsy ampy ary voafetra amin'ny fotoana, dia marina amin'ny fahatsapana fa misy fiantraikany amin'ny toe-javatra misy antsika ankehitriny sy ny fifandraisantsika rehetra, na dia ny fanjakan'Andriamanitra ho avy aza, izay ao amin'ny Eto sy ankehitriny dia mbola tsy tanteraka akory, tsy hita taratra amin'ny zava-misy rehetra. Marina izany raha ny fisaorana ny fahasoavan'Andriamanitra izay zaraintsika, toy ny voany, ny voan-tsinapy dia ny ataon'ilay Tsitoha amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina mba hampahafantarana ny olona an'i Jesosy Kristy sy ny fanjakany. Androany, araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia afaka mandray am-po amin'ny sehatry ny fiainantsika manokana sy ara-tsosialy ny fomba fiainantsika, ny sasany amin'ireo fitahiana amin'ny fitondran'i Kristy sy ny fanjakany.
Nambara ny fahamarinana
Mba hanazavana misimisy kely dia tokony hasongadina fa amin'ny ataontsika dia tsy manomana ny fototry ny fanjakan'i Kristy isika, ary tsy manamarina izany akory. Andriamanitra, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina no efa nanao an'io. Ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy dia misy ary efa misy izany. Matoky ny fiverenany isika. Azontsika ianteherana izany. Io zava-misy io dia tsy miankina amintsika. Asan'Andriamanitra io. Ka inona no ataontsika amin'ny fijoroantsika ho vavolombelona, ​​ireo famantarana asiana antsika, raha tsy tratran'ny Fanjakan'Andriamanitra ilay izy, na tsy miha lasa mitombo? Ny valiny dia ny famantarana antsika, izay apetratsika, dia manambara amin'ny sombintsombiny ny fanjakan'Andriamanitra ho avy. Ny adidintsika ankehitriny - ny tombontsoantsika - dia ny fijoroana ho vavolombelon'ny zava-misy momba ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny teny sy ny atao.
Dia inona no ho entin'ny farany, dia ny fiverenan'i Kristy? Ny fiaviany fanindroany dia tsy manome ny tena zava-misy faratampony ho an’ny fanjakan’Andriamanitra, toy ny hoe tsy nisy afa-tsy ny hery ilaina ilaina mandra-pahatongan’izany. Efa zava-misy tonga lafatra izany ankehitriny. Jesosy Kristy dia efa Tompo, Mpanavotra sy Mpanjakantsika. Izy no manapaka. Mbola miafina anefa ny fanjakan’Andriamanitra amin’izao fotoana izao. Tsy mamokatra sy miharihary amin’ny fahafenoany manontolo ny fitondrany amin’izao andro ratsy izao. Rehefa hiverina i Kristy, dia haseho amin’ny fomba tonga lafatra ny fanjakan’Andriamanitra sy ny vokany rehetra. Ny fiverenany na ny fisehoany indray (ny parousia) dia miaraka amin'ny fanambarana na ny fampahafantarana (ny apokalipsy) ny fahamarinana sy ny zava-misy momba ny maha-izy azy sy ny zava-bitany; amin'izany fotoana izany ny tena fahamarinana momba ny hoe iza i Kristy sy izay ho tonga azy. natao ho antsika, mba ho famonjena antsika, mba haseho amin’ny olona rehetra. Hambara amin’ny farany izay nahaforona ny olona sy ny asa fanompoan’i Jesosy Kristy. Hamirapiratra eny rehetra eny ny voninahitr’izany rehetra izany ka hampivelatra ny vokany feno. Hifarana amin'izay ny fotoana hanaovana fanambarana, vonjimaika, ary fe-potoana voafetra. Tsy hafenina intsony ny fanjakan’Andriamanitra. Hiditra ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao isika. Tsy mila taratasy fanamarinana intsony; fa isika rehetra dia samy hijery ny zava-misy amin'ny maso. Izany rehetra izany dia hitranga amin’ny fiverenan’i Kristy.
Noho izany ny fiainana kristiana dia tsy hoe mitondra ny mety ho herin’ny fanjakan’Andriamanitra hiasa. Tsy anjarantsika ny manakatona ny elanelana misy eo amin’ny zava-misy iainan’izao tontolo izao feno fahotana sy ny idealin’ny fanjakan’Andriamanitra eto an-tany. Tsy amin’ny alalan’ny ezaka ataon’ilay Tsitoha no hanaisotra ny zava-misy iainan’ny zavaboary rava sy manohitra ary hanolo izany amin’ny filamatry ny tontolo vaovao. Tsia, fa i Jesosy no Mpanjakan'ny mpanjaka rehetra sy Tompon'ny tompo rehetra ary ny fanjakany - na dia miafina aza - dia tena misy ary tena misy. Ho lany ny fotoanan'izao tontolo izao ratsy ankehitriny. Isika izao dia miaina, toy ny hoe, ao anatin’ny tsy zava-misy, ao amin’ny fisehoan’ny zavaboarin’Andriamanitra namboarin’Andriamanitra simba sy voaolana, izay efa azon’i Kristy indray tamin’ny namerenany izany tamin’ny lalana marina, nandresy ny herin’ny ratsy. Amin’izany fomba izany no ahafahany miaina mifanaraka amin’ny tanjony tany am-boalohany dia ny fanatanterahana ny drafitra faratampony nataon’Andriamanitra. Noho i Kristy dia ho afaka amin’ny fanandevozana ny zavaboary rehetra ary ho tapitra ny fitarainany (Romana 8,22). Manavao ny zava-drehetra i Kristy. Izany no zava-misy tena manan-danja. Saingy mbola tsy fantatra tanteraka izany zava-misy izany. Amin’izao fotoana izao, entanin’ny Fanahy Masin’Andriamanitra isika, dia afaka mijoro ho vavolombelona, ​​vonjimaika sy vonjimaika, amin’ny sehatra rehetra eo amin’ny fiainana, mikasika izany zava-misy ho avy izany, ary amin’ny fanaovana izany dia tsy mijoro ho vavolombelona fotsiny isika, ary azo antoka fa tsy. iray izay fantatsika, fa Kristy sy ny fanjakany, izay haseho amin’ny fahatanterahana indray andro any. Izany zava-misy izany no fanantenantsika ara-dalàna - izay iainantsika ankehitriny, tahaka ny fanaontsika isan'andro.
Ny tontolo sivily sy ara-politika Inona no dikan'izany eo amin'ny sehatra sivily sy ara-politika ho an'ny Kristianina izay manaiky ny fitondran'i Kristy sy miaina amin'ny fanantenana ny fanjakan'Andriamanitra ho avy? Ny fanambarana ara-Baiboly dia tsy manohana ny hevitra hoe "fandraisan'ny kristiana" antoko politika, firenena na andrim-panjakana ivelan'ny fotoam-pivavahana. Saingy tsy mitaky ny tsy fitsabahana koa izany - izay aseho amin'ny teny hoe "fisarahana". Nitory i Kristy fa tsy tokony hisaraka amin’ity tontolo feno fahotana sy simba ity isika7,15). Ny Isiraelita, rehefa natao sesitany tany an-tany hafa, dia nasaina nikarakara ny tanàna nonenan’izy ireo.9,7). Nanompo an’Andriamanitra teo anivon’ny kolontsaina mpanompo sampy i Daniela ary nandray anjara tamin’izany, sady nahatoky tamin’ny Andriamanitry ny Isiraely. Nampirisika antsika i Paoly mba hivavaka ho an’ny fitondram-panjakana sy hanaja ny herin’olombelona izay mampandroso ny tsara sy misoroka ny ratsy. Mampirisika antsika izy mba hihazona laza tsara na dia eo anivon’ireo mbola tsy mino an’ilay Andriamanitra marina aza. Ireo teny fampitandremana ireo dia midika fifandraisana sy fahalianana hatramin'ny fandraisana andraikitra amin'ny maha olom-pirenena sy ao anatin'ny rafitry ny andrim-panjakana - fa tsy fitokanana tanteraka.
Asehon’ny fampianaran’ny Baiboly fa olom-pirenen’izao tontolo izao isika. Saingy miaraka amin'izay koa dia manambara fa, ny zava-dehibe kokoa, dia olom-pirenen'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Izao no ambaran’i Paoly ao amin’ny taratasiny: “Koa tsy vahiny sy vahiny intsony ianareo, fa mpiray tanindrazana amin’ny olona masina sy ankohonan’Andriamanitra.” ( Efesiana 2,191) ary manao hoe: “Any an-danitra ny zom-pirenentsika; izay no andrasantsika ny Mpamonjy, dia Jesosy Kristy Tompo” (Filipiana 3,20). Ny Kristianina dia manana zom-pirenena vaovao izay tsy isalasalana fa manana ny laharam-pahamehana amin’ny zava-drehetra eo amin’izao tontolo izao. Saingy tsy mamafa ny zontsika sivily taloha izany. Fony nigadra i Paoly, dia tsy nandà ny zom-pirenena romanina, fa nampiasa izany mba hahazoana antoka ny fanafahana azy. Amin'ny maha-Kristianina antsika dia mahita ny maha-olom-pirenena antsika taloha isika - eo ambanin'ny fitondran'i Kristy - mifamatotra tanteraka amin'ny heviny. Eto koa isika dia sendra olana saro-pady izay mety hitarika antsika amin'ny vahaolana maimaika na fanatsorana ny olana. Fa ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana no mitarika antsika hiaritra sarotra ho an’ny fijoroana ho vavolombelona momba ny fanjakana sy ny fanjakan’i Kristy.
Zo roa sivily
Manaraka ny famintinana nataon’i Karl Barth momba ny fampianarana ara-baiboly sy ny fitadidiana ny fampianaran’ny fiangonana nandritra ny taona maro, dia hita fa ireo izay an’i Kristy sy ny fanjakany eto amin’ity tontolo ankehitriny ity dia anisan’ny fiangonana roa samy hafa amin’ny fotoana iray ihany. Manana zom-pirenena roa isika. Toa tsy azo ihodivirana io resaka saro-takarina io satria miaraka amin’ny fahamarinana fa misy fotoana roa mifanindry, nefa amin’ny farany dia iray ihany, dia ny ho avy, no hanjaka. Ny zontsika sivily tsirairay dia mitondra adidy tsy azo ihodivirana, ary tsy azo esorina amin'ny tanana fa mety mifanipaka tsara ireo. Indrindra indrindra, tsy misy antoka fa tsy ho voaloa ny vidiny iray raha jerena ny adidy amin'ny roa tonta. Hoy àry i Jesosy tamin’ny mpianany: “Mitandrema anefa ianareo! Fa hatolony ho amin’ny fitsarana ianareo, ary hokapohina ao amin’ny synagoga, ary ho entina eo anatrehan’ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko, ho vavolombelona aminy” (Marka 1.3,9). Misy toe-javatra mitovitovy amin’izany, izay taratry ny zava-nitranga tamin’i Jesosy mihitsy, dia hita ao amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly. Mety hipoitra àry ny fifandirana eo amin’ireo zo sivily roa ireo, izay tsy ho voavaha tanteraka eto amin’ity tontolo ankehitriny ity, raha tsy izany.
Ampifandraiso amin'ny afovoany tena izy roa
Zava-dehibe ny mamantatra ny fomba tokony hifandraisan'ireo roa ireo andraikitra roa ireo. Matetika dia tsy manampy azy ireo ny mihevitra azy ireo hifaninana, na dia mifanipaka aza izy ireo indraindray. Tsy mahasoa ihany koa ny mahita azy ireo voarindra ara-dalàna, izay misy ny laharam-pahamehana ho loha laharana ary avy eo ny lanjany manaraka, izay midika fa ny hetsika faharoa na fanapa-kevitra dia raisina aorian'ny nahazoana ny laharam-pahamehana. manana. Amin'ity tranga ity dia mihena ny fahitany fa maro, raha tsy ny ankamaroany, ireo andraikitra izay ambara fa faharoa dia tsinontsinoavina ary atao tsirambina.
Ankoatr'izay, tsy mitombina ny misafidy fomba hierarchical somary arakaraka izay olana faharoa, satria nesorina tamin'ny laharam-pahamehana izy io. Araka ity rafitra ity, azontsika antoka fa mandray ny andraikitra voalohany ao anatin'ny paroasy isika mba hanaovan-tena ara-drariny amin'ireo laharana faharoa ao amin'ny paroasy sivily, toy ny hoe mahaleo tena izy ireo ary manaraka ny fomba amam-panao na fenitra, tanjona na tanjona izay mamaritra ny fomba andraikitry ny andraikitra mijery ao anatin'ny faritra tsy fiangonana. Ny fomba toy izany dia mitarika ny fizarazarana izay tsy manao ny rariny fa ny fanjakan'Andriamanitra dia efa niditra tamin'izao vanim-potoana izao, ary miaina toy ny fiverenan'ny fotoana nifanarahana isika. Ny fijerena ny andraikitra laharam-pahamehana amin'ny fitoriana ny fiangonana dia misy fiantraikany amin'ny fomba hanatanterahantsika ny laharana faharoa, fiaraha-monina misy antsika. Ireo fehin-kevitry ny roa tonta dia mifamatotra, izay ahitantsika ny fanantenana amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny hoavy sy ny fijoroantsika ho vavolombelona, ​​ny ataontsika rehetra - ho laharam-pahamehana izany - ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hijanona ho miafina na faharoa. Noho ny fitondran'i Kristy, ny firaisana amin'ny lahatra izay nomen'Andriamanitra ny voary rehetra, ary ny fahavitan'ny zava-drehetra eo ambanin'i Kristy amin'ny maha Mpanjaka ny Mpanjaka sy Tompon'ny Tompontsika azy, dia ny ivon-toeran'ny Tsitoha no ivon'ny zava-misy rehetra - eo afovoan'ireo vondrona roa misy antsika. 2 Ny hetsika rehetra ataon'ny olombelona dia tokony amboarina, voalamina ary apetraka amin'ny fanompoana an'ity ivon-toerana ity, ary tokony hampihatra azy mihitsy. Diniho ny andriamanitra telo izay mifantoka amin'ny andian-dahatsoratra maromaro izay samy mizara ivony iray ihany. Jesosy Kristy miaraka amin'ny fanjakany amin'ny ho avy no ivony. Ny Fiangonana izay an'i Kristy dia mahalala sy manaja azy irery ary miorina eo afovoan'ny faribolana manodidina ny afovoany. Fantatry ny fiangonana ity ivon-toerana ity. Fantany ny toetran'ny fanjakana amin'ny ho avy. Miorina amin'ny tany marim-pototra ny fanantenany ary manana ny heviny tsara ny fototry ny fitiavana izy ireo, hatrany amin'ny fahamarinana mankany amin'ny vondron'olona marina ao amin'i Kristy. Ny asan'izy ireo dia ny hahatonga ity foibe ity hita maso ary miantso ny hafa hiditra an'io faribolana afovoany io satria io no loharanon'ny fiainany sy fanantenana. Ny rehetra dia tokony anjaran'ny fiarahamonina roa tonta! Ny ivon'ny fisiany dia izy koa no ivon'ny fisiam-piangonana, na dia mihatra ihany aza ny adidiny amin'ny tsy fivadihany fa mihoatra noho ny rehetra amin'ny vondron'olona amin'ny ankapobeny. Araka ny tanjony, Andriamanitra ao amin'i Kristy no ivon'ny voary rehetra ary noho izany ny fiaraha-monina roa. Jesosy Kristy no Tompo sy Mpanavotra ny voary rehetra - ny hery sy ny didy rehetra, na fantany izany na tsia.
Ny paroasy sivily ivelan'ny fiangonana dia azo heverina ho faribolana manodidina izay lavitra kokoa ny faribolana anatiny ao amin'ny paroasy. Tsy mahalala momba ny foibe izy io, ary tsy mahafantatra azy io, ary ny iraka nomen’Andriamanitra dia tsy midika ho fanehoana izany. Ny tanjony dia tsy ny handray ny andraikitry ny paroasy na ny hanoloana azy (tahaka ny nanandrana tany Alemaina Nazia ary nankatoavin'ny mpitarika ny fiangonana alemà). Na izany aza, ny fiangonana dia tsy tokony handray an-tanana ny asany amin’ny maha-mpiangona lehibe kokoa azy. Fa ny paroasy sivily amin’ny manodidina dia miray foibe aminy, ary mifamatotra tanteraka amin’i Jesosy ny fiafarany; ny Tompo no ambonin’ny fotoana rehetra sy ny habakabaka rehetra, ny tantara rehetra sy ny fahefana rehetra. Ny kongregasiona sivily araka ny fantatsika dia tsy mahaleo tena amin’ny foibe iraisana, ilay zava-misy iainan’ny fiangonana izay eken’ny fiangonana ary iharan’ny adidy faratampony amin’ny tsy fivadihana. ary ny fanjakany ho avy. Ary manao ny rariny amin'ity asa ity amin'ny fiezahana hanome endrika ao anatin'io kongregasiona midadasika io ho amin'ny tetik'asa, ny endriky ny maha-izy azy ary ny fahafahan'ny fiaraha-miombon'antoka, izay - na ankolaka aza - manondro an'io zava-misy ifotony io. Ireo taratry ny fomba fiainana ireo, izay tafiditra ao anatin’ireo adidy midadasika kokoa, dia hahita ny akon’ny fitondran-tena ara-pivavahana na mifanitsy amin’izany. Saingy tsy ho vitan'izy ireo fotsiny ny haneho izany ankolaka, tsy mazava, mety mbola tsy mazava ary tsy misy manjavozavo. Andrasana anefa izany. Ny fiangonana midadasika dia tsy ary tsy tokony ho fiangonana. Tokony handray soa avy amin’izany hatrany anefa izy io, satria ny mpikambana ao aminy dia mikatsaka ny ho tompon’andraikitra amin’izany sy eo anatrehan’ny Tompo.
Famantarana mitahiry ny fiarovana sy ny fiarovana
Ny zava-misy izay ataontsika amin'izao fotoana izao, izao tontolo izao ratsy izao dia miharihary manokana amin'ireo ao amin'ity faritra midadasika amin'ny boriborintany ity izay mametraka ny fanantenany amin'ny fotoan'izao tontolo izao sy mahalala ary mivavaka amin'ny ivon-toerana. Ny fototra teolojika sy loharano ara-panahy amin'ny fiarahana misokatra amin'Andriamanitra, misaotra an'i Jesosy Kristy dia tsy naseho an-tsitrapo na an-tsitrapo nampiasain'ireo hetsika sivika natao tamin'ny fanompoana teo amin'ny mpiara-monina manodidina. Saingy ny fanao, ny fenitra, ny fitsipika, ny lalàna, ny maha-izy ary ny fahalalam-pomba ao amin'io faritra midadasika io dia afaka mihavana, na, toy ny nampitovina tamin'ny fiainana izay nomen'Andriamanitra antsika ao amin'i Kristy. Ny fitaomana kristiana dia natao hanehoana am-pahendrena ny faritry ny andraikitra ary, araka izay azo atao, mba hanatanterahana araka izay azo atao, ireo ohatry ny fandaminana, ny fitsipiky ny fitondran-tena sy ny fanao izay mifanaraka tsara amin'ny tanjon'Andriamanitra sy ny fomba - fomba izay hitranga izao tontolo izao indray andro any. Afaka milaza isika fa ny Fiangonana, ilay vondrom-piarahamonina malalaka kokoa dia miasa ho toy ny feon'ny fieritreretana. Mikendry ny hisorohana ny mpiara-monina manodidina tsy hivadika lavitra amin'ny tanjon'Andriamanitra sy ny tanjon'ny olombelona izany. Ary tsy vitan'ny hoe amin'ny alàlan'ny fanambarany ihany izany, fa amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny tena manokana, izay azo antoka fa tsy misy raha tsy mandoa vidiny ho azy. Amin'ny teny sy ny atao, dia fiarovana sy mpiambina izy, na dia ny fahendreny, ny fampitandremany ary ny fanolorany indraindray dia tsy raharahany na nolavina indraindray.
Avelao hiroborobo ny famantarana famantarana fanantenana
Ny mambran'ny fiangonana dia afaka mampanan-karena ny tontolo iainany ara-kolontsaina - ho toy ny karazana hery enti-mitondra na ho ohatra mamirapiratra - miaraka amin'ny tombontsoa ara-tsosialy ara-nofo, ary koa amin'ny alalan'ny rafi-pandaminana sy famokarana nampidirin'ny filazantsaran'i Kristy. Fa ny fijoroana ho vavolombelona toy izany dia tsy ho afaka ho toy ny fanondro ankolaka fotsiny, hanohanana fotsiny ny asa fanompoana mivantana sy ny hafatry ny fiangonana momba an’Andriamanitra ao amin’i Kristy sy ny fanatrehana sy ny fiavian’ny fanjakany. Ireo ezaka famoronana ireo, izay famantarana ankolaka, dia tsy tokony hanolo ny fiainan’ny fiangonana na ny hafatra fototra sy ny asany. Jesosy, na Andriamanitra na ny Soratra Masina aza dia tsy hotononina mihitsy. Ny loharano mamelona ireo hetsika ireo dia zara raha lazaina (raha misy), na dia miraikitra amin'ny hetsika na ny zava-bita aza ny aura an'i Kristy. Misy fetra ny fijoroana vavolombelona ankolaka toy izany. Mety ho manjavozavo kokoa izy ireo raha oharina amin’ny fijoroana ho vavolombelona mivantana sy ny asan’ny Fiangonana. Mety hivadika ho tsy mifanaraka kokoa noho ny an’ny teny fototra sy ny fijoroana ho vavolombelona fototra ny vokatra. Indraindray ny tolo-kevitra atolotry ny Kristianina ho an’ny tombontsoa iombonana dia tsy eken’ny sampan-draharaham-panjakana na ny sampan-draharaham-panjakana, ny sehatra misy ny fahefana sy ny fahefana, na koa miditra amin’ny fomba voafetra mazava. Avy eo indray, dia mety hampiharina amin’ny fomba izay misy fiantraikany lehibe amin’ny fanjakan’Andriamanitra izany. Ohatra tsara ny ministeran'ny Fikambanan'ny Prison Chuck Colson, izay miasa any amin'ny fonja fanjakana sy federaly. Na izany aza, tsy azo tombanana hoe hatraiza ny fiantraikan'izany. Ny zava-bita sasany dia mety ho vetivety dia mandiso fanantenana. Hisy ihany koa ny tsy fahombiazana. Fa ireo izay mandray ireny fijoroana vavolombelona ankolaka ireny, izay maneho, na dia lavitra aza, ny sitrapon’Andriamanitra sy ny toetrany, dia amin’izany no ilazana ny fon’izay atolotry ny fiangonana. Ny fijoroana vavolombelona araka izany dia karazana fiomanana mialoha ny filazantsara.
Ny adidy voalohany amin'ny fiaraha-monina manodidina dia ny fiantohana ny filaminana sy ny filaminana mba hahafahan'ny Fiangonana amin'ny lafiny rehetra manatanteraka ny anjara toerany sy ara-panahy amin'ny maha-vondrom-pinoana sy ireo mpikambana ao aminy, ny fijoroany ho vavolombelona tsy mivantana amin'ny vondrom-piarahamonina malalaka kokoa. Amin'ny ankapobeny dia hiantoka ny fitsipiky ny lalàna, ny fitsaram-bahoaka. Ny tanjona dia ho soa iombonana. Ny fikarakarana dia tsy tokony hanararaotra ny malemy noho ny matanjaka.
Toa izany no tao an-tsain’i Paoly rehefa, araka ny azo vakiana ao amin’ny Romana 13, dia nilazalaza ny adidy tsara amin’ireo manam-pahefana eo amin’izao tontolo izao izy. Mety ho hita taratra amin’izany koa ny tian’i Jesosy holazaina rehefa nilaza hoe: “Koa atolory ho an’ny mpanjaka izay an’ny mpanjaka, ary ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra!” (Matio 22,21), ary izay tian’i Petera holazaina ao amin’ny taratasiny: “Maneke ny fanaon’ny olona rehetra noho ny Tompo, na ny mpanjaka ho mpanapaka, na ny mpanapaka, izay nirahiny hamaly ny mpanao ratsy sy hidera ny mpanao ratsy. izay manao ny tsara »(1. Petrus 2,13- iray).